9 menus CSS ka jawaabaya si aad u siiso websaydhkaaga xarrago weyn | Abuurista khadka tooska ah
9 Liiska CSS oo leh nashqad jawaab celin ah oo hadda socota
Waxaan ku sii wadaynaa daabacaad kale oo ah naqshadeynta websaydhka oo leh a liistada wanaagsan ee liiska CSS oo leh nashqad jawaab celin ah. Taxane taxane CSS ah oo si gaar ah loogu talagalay qaabkaas oo aan inta badan ka badnayn 768 inji taas oo noo ogolaaneysa inaan u diyaarsano degelkeenna martida inay ka soo galaan taleefannadooda casriga ah.
Runtu waxay tahay mid kasta oo ka mid ah 9-ka menu CSS oo wata nashqadaha moobiilka ee aad hoos ka heli doontid iyagu waa xarrago weyn waxayna ku qalabaysan yihiin taxane animations iyo naqshad tayo sare leh oo faahfaahsan. Ha seegin sidoo kale taxanahan menus wareega oo qaabkaas gaarka ah leh si aan u soo bandhigno qaybaha kala duwan ee degelkeenna.
1 Liiska moobiilka ee fudud
2 Magi meegaarka moobiilka
3 Raadinta abka
4 Animation navigation wareega
5 SVG UI fikradda hagista
6 Faahfaahinta faahfaahinta iyo wareejinta
7 Mobile Gooey navigation
8 Saamaynta Frosty Nav "Toggle"
9 Liiska Mobilada
Liiska moobiilka ee fudud
Liis fudud oo loogu talagalay moobilka abuurnimadii ugu dambeysay taasna toos ayey noo qaadataa ilaa heerka hadda ee naqshadeynta webka qalabka mobilada. Liiska jawaabta oo buuxa oo isticmaalaya Bootstrap 3.x, FontAwesome, CSS flexbox iyo CSS BEM Syntax. Liis fudud oo aad u qaabeysan oo ku saleysan fudeydkiisa in la jeclaado.
Magi meegaarka moobiilka
Liiska meegaha ayaa noo ogolaanaya inaan kudarno tiirar, widgets iyo dhamaan taxanaha walxaha lagama maarmaanka u ah taraafikada tooska ah ee boggayaga Shabakad Liiskan dhinaca jawaabta ee casriga ah ayaa ah mid aad u fudud oo waxaad ka heli doontaa dhammaan qaybaha kaliya booska uu u adeegsado si isleeg.
Waxaan wajahaynaa liis jawaab celin ah oo fikrad ahaan u badan. Hadaad wax raadineyso ka duwan heerka hadda jira Liistada moobiilka, menu-kan wuxuu noqon karaa mid ku habboon. Laga soo bilaabo sumadda hamburger waxaad ka dheereyn kartaa taxanaha taxanaha ah ee aad ku heli karto dhammaan bogagga shabakadda.
Animation navigation wareega
Liiskan jawaab-celinta ah ayaa ka duwan kuwa kale mid ka badan animation kala guur fiican tan iyo markii aan gujino menu-ka hamburger oo leh naqshad qaabaysan. Waxay sidoo kale ku kacaysaa animation xulashada hover si ay u siiso firfircooni dheeri ah. U isticmaal animations GSAP TweenMax iyo TimelineMax.
SVG UI fikradda hagista
SVG iyo animation-ka CSS3 oo loogu talagalay menu asal ah oo asal ah oo kuu qaadaya ku-meel-gaadh hal abuur leh oo ka duwan inta ka hartay liisaska jawaabta ee liistadan. Sidoo kale xusid mudan in ay midab weyn iyo saameyn weyn in ay ku siin karto boggaaga internetka marka laga eego qalabka moobiilka sida kaniiniga.
Faahfaahinta faahfaahinta iyo wareejinta
Aad ugu eg kii hore qaabeynta iyo adeegsiga midabada, ugu yaraan halabuurka bilowga ah, laakiin markan waxay ku kala duwan tahay a menu wareegsan jawaabta kaasoo ku yaal dhinaca shaashadda. Animations waa mid aad u siman oo waa menu kale jawaabi la taabashada weyn si ay u sameeyaan website-ka soo bixi ka mobile ama kiniin ah.
Mobile Gooey navigation
Tani waa saameynta «Gooey» si aad u wanaagsan ayaa loogu dabaqay liiska qaab-dhaqaaqa moobiilka ee waxay ku tiirsan tahay CSS iyo u wareejinta jQuery ee animations-ka. Waxay ku saabsan tahay badhano taxane ah oo furmaya markii aad gujiso astaanta hamburger ee aan ku leenahay bartamaha qaybta hoose ee shaashadda. Mid kale oo ka mid ah kuwa liiska gimmicky ka jawaaba ee wali aad u socda.
Saamaynta Frosty Nav "Toggle"
Liiskan jawaabta leh wuxuu isku dayayaa inuu dalbado a animation siman kaliya markaan riixno badhanka hamburger. Saameynta ay sameyso waa mid cakiran si markaa asalka shaashadda uu u noqdo mid mugdi ah oo waxaan si fiican u kala saari karnaa qayb kasta oo ka mid ah meelaha martida websaydhkeennu mari doonaan Waxaan u haynaa qaar ka mid ah animations fudud qayb kasta oo ka mid ah qaybaha iyada oo aan faan badan, laakiin leh saameyn weyn.
Waxaan dhameynay taxanahan oo ah menus ka jawaabi kara leh mid tayo sare leh. Adiga oo aan marka hore ilaawin inaad mari karto taxane kale oo taxane ah si aad u kala garato websaydhkaaga, kaliya kuwan shaashadda buuxda.
Moobeelka Moobaylka waa midka intaas waxaa lagu gartaa saameynta jQuery iyo in lagu diyaariyo HTML iyo CSS labadaba. Way fududahay halabuurkeeda, laakiin xaqiiqdii waxay awood u leedahay inay ku siiso taabashadaas aasaasiga ah boggeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » 9 Liiska CSS oo leh nashqad jawaab celin ah oo hadda socota